Afaka Miaina Fahantràna’ Anaty Sarintsarin-tanàna Mahantra Ao Afrika Atsimo Ireo Mpanankarena Mpizaha tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2013 22:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, polski, Italiano, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Ny sarintsarin-tanàna mahantra ao Emoya jerena avy any ambony. Loharanon-tsary: http://www.emoya.co.za/
Emoya, fanànan'olon-tsotra natao hilalaovana, hanaovana kaonferansa sy fikarakaram-bàtana ao Bloemfontein, Afrika Atsimo dia namorona sarintsarin-tanàna mahantra ho an'ireo mpizaha tany manankarena mba hiainan'izy ireny sarintsarim-piainana “anatin'ny tontolo tsara aro ao amin'ilay toeram-pihazàna an'olon-tsotra.” Mivaky toy izao ny fampidirana ao amin'ilay sarintsarin-tanàna :
An-tapitrisa ireo olona miaina anaty trano fonenana tsy ara-dalàna manerana an'i Afrika Atsimo. Ireny trano fonenana tsy ara-dalàna ireny dia ahitàna ihany koa ny karazan-trano antsoina hoe Trano bongo, Shantys na Makhukhus. Mazàna ny Shanty iray dia vita avy amin'ny fanambatambarana tafo fanitso na zavatra hafa afaka miaro amin'ny rano izay naorina mba hanana endrika “trano” kely na fialofana hahafahan'izy ireo mivelona tsara. Jiro jabora iray, vata fandraisam-peo mandeha amin'ny vatoaratra, labozia vitsivitsy, toeram-pidiovana any ivelan'ny trano (antsoina ihany koa amin'ny hoe fitontonana lalimbe) ary daba iray izay ampiasain-dry zareo ho fàtana fahandroana sakafo, ireo no ampahany amin'io endri-piainana io.
Azonao atao ankehitriny ny manandrana mipetraka anaty Shanty iray ao anaty tontolo iray tsara aro ao amin'ilay toeram-pihazàna an'olon-tsotra. Io no hany Tanàna Shanty eto ambonin'ny tany manàna fitaovam-panafànana milevina ambanin'ny tany sy fidirana aterineto tsy mampiasa tariby!
Ity ambany ity ny lahatsary iray ahitàna ilay tanàna tsizarizary, nakarin'ny Emoya ao amin'ny YouTube:
Ny ankamaroan'ny olona ety anaty aterineto dia namaritra ilay hevitra ho misavoamboana sy mahamenantra. Siji Jabbar, manoratra ao amin'ny “This Is Africa”, nilaza hoe :
Raha heverinao fa hevitra misavoamboana, tsy manaitra ary manafintohina ny hoe mpanankarena manao fizahantany ka tonga hiala sasatra handany fotoana handehandeha (na hitety) tanàna mhantra iray mba hibanjina ireo mponin'ny tanàna mahantra, tahàka ny fjery biby mandritra ny “safari”, ireo olona ao amin'ny Hotely LafoVidy Emoya & Spa ao Bloemfontein Afrika atsimo kosa dia nahita fomba iray hanomezana zavatra mbola misavoamboana kokoa aza.
Raha mbola tsy renao, ireo olona ao amin'ny Emoya dia nanorina sarintsarinà tanàna Shanty iray ahitàna “trano bongo” hahafahan'ireo vahiny miaina ny hoe toy inona moa izany mipetraka anaty tanàna shanty izany. Amin'ny sandany R850 (€60; $82) – efa ho ny antsasaky ny karama salantsalany isam-bolana ao Afrika Atsimo – ianao sy namanao telo hafa, fianakaviana na mpiara-miasa, dia ho afaka handany alina iray ao anaty shanty iray vita tamin'ny tafo fanitso. Ny “tanàna shanty” naorin-dry zareo dia manana efitrano ho anà vahiny 52. Tsy mivazivazy aminao aho.
Nohazavain'i Siji ny antony mahatonga ilay hevitra ho manafintohina :
Olona iray lavitrisa manerana ny tany no mipetraka anaty tanàna tsizarizary, ary ho andramako hosaintsainina ny amin'ilay vahiny izay, na iray aza amin'ireo olona an-davitrisa ireo, tsy misy te-hanohy hiaina toy izany raha mba afaka nisafidy. Ny safidy no antony tena tsy mampisy dikany an'ilay hevitra hoe “manandrana miaina”.
Raha tsy maintsy miaina anaty trano bongo iray natao avy aminà baoritra sy korontam-by ianao, dia azo lazaina ho ara-bakiteny faianao izany no olona mahantra, ary ny fahantrana dia ny tsy fahafahana misafidy. Hatrany am-pahaterahana dia efa tao anatiny sy nitombo teny anaty tanàna shanty ianao. Tsy hadisoana ara-tsaina io, na dia izany aza no fahitàny sasany azy, fa ho an'ilay olona miaina anaty trano bongo dia izy mihitsy no tsapany ho zava-tsy manjary, indrindra fa izay no hafatra nampitain'ny fiarahamonina ho azy. […] Resaka tolona isanandro mba hifikiranao amin'ny maha-olona anao io, raha ny hafa kosa, mahalala tsotra izao na tsy nahy, miezaka ny manàla anao amin'izany. Resaka ahiahy tsy misy farany: hahita sakafo sahaza ho an'ny ampitsonao ve ianao? ny amin'ny herinandro manaraka eo? Afaka ny harary ve, ary inona no hitranga raha mitranga izany? Horavàna ve ny trano bongo kelinao rahampitso maraina satria naorina “tsy ara-dalàna’, hahatonga anao ho tsy manan-kialofana? Tsy afaka ny hiaina izany ianao raha tsy tena hoe mahantra marina tokoa angaha, ary tsy afaka ny hilefa hiala ny fahantrana, na ny trano bongonao, mandritry ny alina na anatin'ny herinandro iray na rehefa leo ny “niainana” tahaka izany. Araka izany ny zavatra mba hiainan'ireo vahiny tsirairay any anatin'ny iray amin'ireny “trano bongo” ireny dia tsy hafa fa alina iray na maromaro nanaovana filasiana (camping) fotsiny ihany
Ny sarintsarin-tanàna mahantra ao Emoya natao ho an'ny mpizaha tany any Afrika Atsimo. Loharanon-tsary: http://www.emoya.co.za/
Anaty fanehoankeviny ao amin'ny lahatsoratr'i Siji, Kathy Smedley nandray ilay hevitra ho hadalàna fotsiny izany :
Hadalana tsotra izao fotsiny io!!! Fa inona no tsy mamely eto amin'ity izao tontolo izao ity no dia misy manan-tsaina tonga miaraka aminà atidoha mivilana tahaka izao e. Mba fantatr'izy ireo ve fa fandatsàna ireo olona tsy mba nanana safidy teo amin'ny fiainany ny miaina tahaka izao? Hevitra tena misavoamboana, ipitsiho any ireo adala kaondrana mety HANDOA vola marina tokoa hipetraka amin-javatra tahaka io toerana io. Raha misy olona te-handoa vola hipetraka anaty trano bongo iray, aleo ry zareo mba any amin'ny tena izy no hapetraka, ary avy eo mety mba hamoha ny paoketrany ry zareo ka hampiasa ny volany amin'ny zavatra tsara, tahàka ny fanomezana fanampiana ireo mpanao asa soa na mpanome fialofana ho an'ny tsy manan-trano izay afaka hampiasa ny dolara beny hanampiana ireo niangaran'ireny vintana tsy manan-koraisina ireny.
Mpamaky iray hafa, Keniana miaina anaty trano tsizarizary, no nanipika ny banga tao anatin'ilay hevitra :
Tsy ananan-dry zareo ny tena haingon-kanina, HELOKA BEVAVA
Sarintsarinà tanàna mahantra natao avy amin'ny tafo fanitso. Loharanon-tsary http://www.emoya.co.za
“Henatra, henatra ho an'i Emoya,” hoy i Heather Laninga :
Tsy mbola nahita mihitsy aho hatrizay trano bongo nisy fandriana malemileny sy mifanao ambaratonga, na naorina ho kanto hanaovan-javatra toy izao. Tena tsy misy dikany tanteraka sady tsy firaharahàna. Henatra, henatra ho an'i Emoya. Antenaiko fa handeha ho any amin'ireo ONG ho fanampiana ny mahantra ny 100% amin'ny tombony azo ao!
Na izany aza, heverin'i Dirk Pieters fa tsara kosa ilay hevitra :
Hevitra tsara kosa ity.
Aza maika ny hitsara. Feno an'ireo zavatra ratsy lazainareo ireo ny fiainana anaty trano bongo, saingy kosa misy fo sy fanahiny izy io izay tsy ho hitanao na aiza na aiza, indrindra fa any amin'ireo tanàna onenan'ireo fotsy hoditra mpanambony tena izay tsy ahitànao olona mandihindihy eny an'arabe na olona mitafatafa amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy.
Betsaka amin'ireny trano bongo ireny izay tsarainao ho lozabe no naorina tamin'ny asa tsy takatry ny saina, noravahana ary nobanjinina tamim-pireharehana sy fitiavana nony vita.
Heveriko fa boky tena mahaliana ny “Shack Chic” – Trano Bongo Misy Ronono” izay nampiseho lafy iray amin'i Afrika Atsomo ary nahatonga ahy hirehareha
ONE, hetsika iray iraisan'ny mponina erantany hiadiana amin'ny fahantràna lalim-paka, dia nampakatra lahatsoratra iray mikasika ilay sarintsarin-tanàna mahantra ho ao amin'ny pejiny Facebook sady nanontany hoe, “Mba inona no hevitrao mikasika ity?”
Mamaly ilay fanontaniana, Selina Dawn Kyle nihevitra fa mety hanampy eo amin'ny lafiny ara-tsaina ilay hevitra :
raha ny marina….. raha vita tsara… mety hanampy ara-tsaina ilay izy… ny marina mampalahelo dia be ny olona tsy afaka hahatakatra na handalina ny fiainan'ny hafa raha tsy mirotsaka mankao anatin'ilay izy mihitsy ry zareo… ka dia AVELAO RY ZAREO hirotsaka e…. fa izao fotsiny, aza asiana an'ireny milina mpitsinjara mibaiko tena ireny, ok? ALEO MBA HO TENA IZY E. Te-hahita ry zareo. Dia aleo hahita
Nanahy i Philomena Elizabetta Hall :
Marika tsara, saingy manontany tena aho raha tena mety hanampy ara-tsaina tokoa ilay izy? Iray amin'ireo vesatra goavana ao an-tsaina ny tsy fisian'ny fanantenana, miaina & maty any an-trano bongony ny olona, ireto mpanankarena mpizaha tany kosa mahafantatra fa hiala amin'izany izy ireo avy eo – kely mihitsy ny vintana ho an'ireo teraka tany amin'izy ireny mba hialàny ao
Mety ho fatratra ilay hevitra, hoy Sue Henderson, raha toa nanana tanjona hanabeazana :
Eny raha toa ka nanana tanjona hanabeazana ny olona ilay izy, mety ho fatratra tokoa, saingy ry zareo aza mbola hahazo fanafanàna, trano fidiovana madio, sy ny sisa, sy ny sisa. Araka ny ambaran'ilay lahatsoratra, na dia mpizaha tany monina any amin'ny tena tanàna mahantra aza ianao dia mitovy ihany izany satria afaka miala amin'izany foana ianao amin'ny fotoana rehetra tianao hialàna. Ireo olona izay efa tena eo no fiainany dia zara raha manana izay safidy izay
Efa hatry ny ela aho no tsy taitra intsony amin'ny fidehadehaka sy tsy firaharahàn'ireo olona manan-katao
Jan Zee nanoro hevitra hoe:
Mila miaina anaty trano bongo tena izy ireny mpanankarena mpizaha tany ireny, miaraka aminà tena fianakaviana, farafahakeliny herinandro iray. Mihinana izay haniny ao, miaina ny fiainan-dry zareo, mikaroka fako eny amin'ny toerana ikarohan-dry zareo, mitafy izay itafiany, matory miaraka amin'ny kongona any ampandriany, sns.. Amin'izay dia tena niaina marina tokoa ny zava-misy ry zareo ary angamba mba tena hanao zavatra ho enti-manampy.
Elissa Pitton Shuck nananamrika hoe :
Fahantrana hatao fialamboly – fifotetahana vaovao azo antoka!! Mankaloiloy.
Ny Drafi-Pampandrosoana ara-Toekarena an'i Afrika dia manontany ao amin'ny pejiny Facebook, “Ahoana no fahatsapanao an'ity? Sarintsarin-tanàna mahantra ho an'ireo mpanankarena mpizaha tany.” Namaly i Zita Bett :
Tena mampalahelo hoe azon'ny vola vidiana hatramin'ny tanàna mahantra. [sento] Halan'ireo olona manankarena ny hiatrika ny tena fiainan'ny hafa, noho izany dia manangana sarintsarin'ny tena zava-misy ry zareo